Saraakiil sarsare oo ka tirsan Aqalka Cad ayaa dabada ka waday qorshe warshad hubka nuclearka ah sameysa, oo balaayiin dollar ku kacayso, lagaga dhiso dalka Sacuudi Careebiya. Saraakiishan ayaa sidoo kale doonayey in Maraykanku uu Sacuudiga la wadaago aqoonta teknolojiga nuclearka, iyada oo xitaa ay digniin bixinayeen saraakiisha amniga iyo kuwa anshaxa ee Maraykanku. Warkan waxaa laga soo xigtay warbixin cusub oo laga helay congresska Maraykanka.
Warbixintan oo Talaadadii shalay ka soo baxday Guddi hoosaaska Kormeerka ee Aqalka Hoose ee Congresska oo hadda Dimoqraadigu uu hogaamiyo ayaa lagu sheegay in La-taliyihii hore ee Aminga Qaranka Micheal Flynn iyo labo kalkaaliye oo uu lahaa ay iska dhago tireen digniino is-xigxigay oo sheegayey in dadaaladoodu ay jabinayeen sharciyada Maraykankan.
Mudanayaasha labada xisbi ee Dimoqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa welwel ka muujiyey in Sacuudigu uu hub nuclearka ah sameysan karo, haddii Maraykanku uu teknolojiga u gudbiyo iyada oo aan kormeer habboon lagu sameynin.